mmCert - Myanmar Computer Emergency Response Team
mmCERT isanational computer emergency response team for dealing with cyber security incidents in Myanmar. Besides doing incident handling activities mmCERT works to increasepublic awareness in cyber security and supports technical advisories in its community.
Facebook Team အယောင်ဆောင်ထားသော Page များနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးသတိပေးချက်
၁။ (၁၇-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ယနေ့တွင် Blue Check Mark Service နှင့် Blue Check Mark Notification တို့မှ Facebook Team အယောင်ဆောင်၍ အောက်ပါ Message များကို ပေးပို့နေပါသည်။ Your page has been reported by others about lying or fraud, to prevent this we need to verify your account. We work hard to prevent actions that endanger all other Facebook users or security on Facebook. Please confirm the repair of your Facebook account. Follow the instructions for the link below: (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်။)
Ransomware ဂိုဏ်းတစ်ခုသည် အာဂျင်တီးနား အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (ISP) ထံမှ ဒေါ်လာ ၇.၅ သန်းတောင်းဆို
Ransomware ဂိုဏ်းတစ်ခုသည် အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Telecom Argentina ၏ ကွန်ရက်အတွင်းသို့ ကူးစက်ပျံနှံ့ခဲ့ပြီး ဝှက်လိုက်သောဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၇.၅ သန်း တောင်းဆိုနေသည်။ ၎င်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုသည် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့၊ စနေနေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဂျင်တီးနား၏ အကြီးမားဆုံး ဟက်ကာအဖွဲ့များမှ တစ်ဖွဲ့၏လက်ချက်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်)
"𝗔𝘇𝗼𝗿𝘂𝗹𝘁 𝗧𝗿𝗼𝗷𝗮𝗻" နှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးကြေညာချက်
𝗔𝘇𝗼𝗿𝘂𝗹𝘁 𝗧𝗿𝗼𝗷𝗮𝗻 ဆိုသည်မှာ သတင်းအချက်အလက်ကို ခိုးယူရန်အတွက် ရေးသားထားသော Trojan ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို email attachment များ (Zip ဖိုင်များ၊ Microsoft Word/Excel ဖိုင်များ) မှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ အဖျက်အမှောင့်ကုဒ်များပါရှိသော Website များ၊ တိုက်ခိုက်ခံထားရသော Website များမှတဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ တရားဝင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အယောင်ဆောင်ထားသော Installer ဖိုင်များ၊ Keygen များ (ပုံ-၁) မှသော်လည်းကောင်း ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါသည်။ STOP Ransomware ရေးသားသူများသည် ၎င်းတို့၏ Ransomware နှင့်အတူ Azorult Trojan ကို ထည့်သွင်းဖြန့်ချီခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထွက်ရှိသော STOP Ransomware မျိုးကွဲဖြစ်သည့် (.meds) တွင်မူ Azorult Trojan ကို နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Vidar Trojan နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းထွက်ရှိသော STOP Ransomware မျိုးကွဲများတွင်မူ Vidar Trojan ကိုသာ အသုံးပြုလျက်ရှိပါသည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန်)
အရေးကြီးသော အားနည်းချက် (၂)မျိုးကို ပြုပြင်ဖာထေးရန်အတွက် အရေးပေါ် Windows Update ကို Microsoft မှ ထုတ်ပြန်
သန်းရာချီသော Window 10 နှင့် Server Edition အသုံးပြုသူများကို ထိခိုက်စေနိုင်မည့် ပျက်စီး ထိခိုက်နိုင်မှုမြင့်မားသည့် လုံခြုံရေးအားနည်းချက် နှစ်မျိုးကို ပြုပြင်ဖာထေးနိုင်ရန်အတွက် Microsoft မှ Out-of-band Software Updates ကို ယမန်နေ့က တိတ်တဆိတ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 ပြိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာနကိုယ်စားပြု "𝗠𝗠_𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗦𝗲𝗰" အသင်းက အဆင့်(၁၂)ရရှိ
𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗲𝗮𝗺𝘀 (𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧) နှင့် 𝐔.𝐒. 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐨𝐦𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲’𝐬 (𝐃𝐇𝐒) 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 & 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲 (𝐂𝐈𝐒𝐀) တို့က ကြီးမှူးကျင်းပသည့် “𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗖𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬” ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၂၃) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည(၇)နာရီခွဲမှ ဇွန်လ(၂၆)ရက်နေ့ နံနက် (၃)နာရီခွဲထိ ၃ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပခဲ့ရာ အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာန ကိုယ်စားပြု “𝗠𝗠_𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝗦𝗲𝗰” အသင်းက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန်တွင် အဆင့်(၁၂) ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ (ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)
COVID-19 ၏ Indicators of Compromise (IoC) များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်
အောက်ပါ website များနှင့် အီးမေးလ် message ID များ စုစုပေါင်း (၂၅၁၁) ခုသည် အဖျက်အမှောင့်လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါရှိသောကြောင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်၊ ဖတ်ရှုရန် မသင့်သော site များ၊ မေးလ်များအဖြစ် သတိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
Website စာရင်းကို အောက်ပါလင့်တွင် download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။
Coronavirus Phishing Scam များနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်
ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် Coronavirus ကူးစက်မှုများပျံ့နှံ့လာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ . ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Mimecast က ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့် “Singapore Specialist: Corona Virus Safety Measure” အမည်ဖြင့်…
STOP Ransomware (.lapoi) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဇူလိုင်လ (၂၃)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.lapoi) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: ZivCxija0GBwtwtwD0q4JRy80spT6lUyybPYhot1 Password: nA3GY05Mr9SskX1H4M5CNkSN9p9jIqm8JO9ugyt2
STOP Ransomware (.dodoc) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဇူလိုင်လ (၂၃)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.dodoc) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်- . Personal ID: tC9q9U9z1CHXj6ywfSklY5Ati8qfrhwcOEQpvQt1 Password: QFn6Gxwfzg6bHlO5DTGKtMh8Y2EfS33u4fbrVrt2
STOP Ransomware (.bopador) နှင့် (.novasof) မျိုးကွဲတိုက်ခိုက်ခံရသူများအတွက် Key ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်နေ့ (ယနေ့) တွင် စတင်တိုက်ခိုက်သော STOP Ransomware (.bopador) နှင့် (.novasof) ကို OFFLINE အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံထားရသူများအတွက် Password ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်
In l2tp_session_delete and related functions of l2tp_core.c, there is possible memory corruption due toause after free.
yWorks yEd Desktop before 3.20.1 allows code execution via an XSL Transformation when using an XML file in conjunction withacustom stylesheet.
In skb_headlen of /include/linux/skbuff.h, there isapossible out of bounds read due to memory corruption.
In kbd_keycode of keyboard.c, there isapossible out of bounds write due toamissing bounds check.
In skb_to_mamac of networking.c, there isapossible out of bounds write due to an integer overflow.
In blk_mq_queue_tag_busy_iter of blk-mq-tag.c, there isapossible use after free due to improper locking.
Search all vulnerabilities
Resources: National Vulnerability Database
Internship Training, NCSC, May 13 - July 31 2019
Incident Handling (Intrusion Detection), NCSC, May 13-21 2019